Mobile Operator တွေရဲ့မလိမ့်တပတ် ဖုန်းဘေလ်တွေခိုးယူခံရခြင်းမှကင်းဝေးကြပါစေ | Online Service Center Myanmar -->
Mobile Operator တွေရဲ့မလိမ့်တပတ် ဖုန်းဘေလ်တွေခိုးယူခံရခြင်းမှကင်းဝေးကြပါစေ
တော်တော်များများ ဘယ် Mobile Operator တွေက ဘေလ်တွေကိုဘယ်လိုခိုးနေပါတယ်ဆိုပြီး​ပြော​နေတာမျိုးတွေကို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ခနတိုင်းမြင်တွေ့ကြားသိနေကြမှာပါ။ ကျွန်တော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ Mobile Operator တွေရဲ့Page တွေက Comment တွေမှာ မန် ့ထားတာတွေမြင်တွေ့တော့တွေးမိသေးတယ်၊ အော်ပရေတာတွေကတော့မခိုးလောက်ပါဘူး၊ ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ App တွေက နောက်ကွယ်မှာ Run နေပြီး ဘေလ်တွေကိုစားနေတာပဲဖြစ်မှာပါဆိုပြီးတော့ပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာ သတိထားမိလာတာက ဖုန်း Message ထဲကို
Thank you, your payment of 450 Ks + tax for ဘာညာ
Thank you, your payment of 300 Ks + tax for ဘာညာ
ဘာညာ Successful subscription for K 300.0/wk Auto renewal on 2019-လ-ရက်
ဆိုပြီး ကိုယ်လည်း ဘာမှမဝင် ဘာမှ subscribe မလုပ်ပါပဲနဲ့ Message တွေဝင်ဝင်လာပြီး ကိုယ့်ဖုန်းဘေလ်ထဲကနေ ဖုန်းဘေလ်တွေဖြတ်ဖြတ်သွားတယ်။
5. Guess It
8. Quest to Million
တကယ္ဆုိ ကျွန်တော့်အနေနဲ ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလုံးဝမှ မယူထားဖူးဘူး။ ဘယ်ဂိမ်းလေးတွေဆော့လို ့ရတယ်ဆိုတာတွေလည်း တခုမှဝင်မဆော့ဖူးဘူး။ ဘယ်နံပါတ်ကိုဘာလေးပို့လိုက်ရင် ဘာတွေကံထူးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်း ဘာမှပြန်မပို့ဖူးဘူး။ ကျွန်တော်လုပ်ဖူးတာဆိုလို့ Data Package လေးတွေဝယ်သုံးတာမျိုးပဲရှိတယ်။
ဒီတော့ တွေးမိတယ်၊ အဲ့ဒါတွေအလိုလျှောက် Subscription ဖြစ်အောင်လုပ်တာက အော်ပရေတာတွေကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆုိတာပါပဲ၊ ကိုယ်လည်းမသိပါပဲ ကိုယ်မယူထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကို ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ ့အလိုလျောက်ယူပြီးသားဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာက အော်ပရေတာတွေပဲရှိမယ်။
Data Package တွေကိုဝယ်ယူတိုင်း နောက်ကွယ်က အဲ့လိုအစီအစဉ်တွေကို Subscribe လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားအောင်လုပ်ထားပုံရတယ်၊ အဲ့ဒါဆိုရင် အများပြောသလို အော်ပရေတာတွေက ဘေလ်တွေကိုတကယ်ခိုးနေတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ရတော့မယ်။ ဖုန်းမခေါ်၊ အင်တာနက်မသုံးပဲ၊ အဲ့ဒီလို Message တွေဝင်လာပြီး ဖုန်းဘေလ်ထဲက ပိုက်ဆံတွေလျော့လျော့သွားတာဟာ အော်ပရေတာတွေရဲ့မလိမ့်တပတ်နဲ ့ခိုးယူမှုတွေလို့ပဲပြောရမှာပါ။
လက်ရှိကျွန်တော်သုံးတဲ့အော်ပရေတာက ၂ ခုပဲရှိတော့ တတ်နိုင်သလောက်တော့ Unsubscribe လိုက်လုပ်ထားတယ်။ အခြားသူတွေလည်း ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ကိုယ်မယူပဲ ( ကိုယ်မသိပဲ ) ဘာအစီအစဉ်တွေယူထားမိလည်းစစ်ဆေးကြည့်ကြပါ၊ ကိုယ့်ဖုန်း Message ထဲကို အပေါ်မှာ ကျွန်တော်ပြောထားသလို ဘာလေးယူလိုက်လို့၊ ဘာလေးယူထားလို ့ဘယ်လောက်ဖြတ်လိုက်ပါပြီဆိုပြီးဝင်လာနေတာတွေရှိနေရင် သေခြာပါတယ် ဖုန်းဘေလ်တွေအခိုးခံနေရပါပြီ။
ကဲ... စစ်ဆေးပြီး ဖုန်းဘေလ်တွေအခိုးမခံရအောင်ကာကွယ်လိုက်ကြပါ။
Telenor နံပါတ္အတြက္ကေတာ့ *979*3*2# Call ကိုခေါ်ပြီး ယူထားတဲ့အစီအစဉ်တွေဆိုတာကို
Unsubscribe လေးတွေလုပ်ပစ်လို့ရပါတယ်။ MPT, Ooredoo, Mytel, တွေကတော့ ဘာနဲ့လုပ်လည်းမသိဘူး။
အားလုံးပဲ အော်ပရေတာတွေရဲ့မလိမ့်တပတ်နဲ့ဘေလ်ခိုးယူခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။
Knowledge Mobile Sharing